Tababarkii Hogaaminta Dhexe ee XDSHSI Uga Socday Gobolka Liibaan oo Si Habsamiya loogu soo Gabagabeeyay Xarunta Gobolka ee Magaalada Fiiltu. - Cakaara News
Tababarkii Hogaaminta Dhexe ee XDSHSI Uga Socday Gobolka Liibaan oo Si Habsamiya loogu soo Gabagabeeyay Xarunta Gobolka ee Magaalada Fiiltu.
Fiiltu(CN) Isniin.Nov.24.2014, sidaan wada ogsoonahay XDSHSI ayaa sanadihii ugu danbeeyay qaaday talaabooyin lagu hirgalinayo horumar waara, xasilooni buuxda iyo maamul suuban oo saxar tiran. Wuxuuna guulo waawayn ka soo hooyey dhinacyada, caafimaadka waxbarashada, biyaha, beeraha jidadka iyo guud ahaanba adeegyada kale ee kor loogu qaadayo ilaha dhaqaalaha Deegaanka.
Haddaba si loo tir tiro saboolnimada iyo jahliga lana dhamaystiro baahiyaha adeegyada shacabkeena korna loogu qaado koboca dhaqaalaha deegaanka waxa uu XDSHSI dajistay qorshayaal lagu xoojinayo dhaq dhaqaaqyada maamulka suuban laguna adkaynayo tiirarka nidaamka dimuqoraadiyadeed.
Sidaad wararkayagii hore ula socoteen dhawaan ayay ahayd markii hogaaminta sare ee XDSHSI ay soo saareen awaamiir iyo jihooyin lagu horumarinaya garaadka siyaasadeed ee hogaaminta dhexe ee XDSHSI.
Waxaana tababaro lagu hirgalinayay awaamiirtaasi laga fuliyay dhamaan 9ka gobol ee deegaanka iyada oo ay ka soo qaybgaleen dhamaan hogaaminta dhexe ee degmooyinka deegaanka.
Haddaba waxa lagu soo gabagabeeyay xarunta Gobolka Liibaan ee Fiiltu tababarkii hogaaminta dhexe oo loo qabtay dhamaan hogaaminta dhexe ee degmooyinka hoos yimaada gobolka liibaan oo socday muda 4 maal’mood ah. Waxaana ku qornaa gobolka liibaan dhaadhicinta awaamiitan oo hagayay tababarka wasiirka hanti dhawraha guud ee DDSI mudane Aadan Kuusow Cali.
Waxaana intii uu u socday tababarkani hogaaminta dhexe fahan buuxa laga siiyay istaraatijiyadaha iyo johooyinka XDSHSI kuwaasi oo ku qotomay ka midho dhalinta qorshayaasha horumarka nabadgalyada iyo maamulka suuban.
Sidoo kale intii uu socday tababarkani waxaa hogaaminta la siiyay buugaag iyo dhukumantiyo ay ka mid yihiin xeer hoosaadka Xisbiga, dastuurka dalka iyo kan deegaanka, barnaamijyada siyaasadeed ee XDSHSI la dagaalanka iyo dabargaynta musuqa iyo waliba buagaagka ka turjimaysa soonyaalkii taariikheed ee uu soomaray deegaanka.
Iyada oo intii uu socday siwayn ay uga doodeen cashiradii ay ku qaateen tababarka fahan midaysanla laysa qaatay ayaa waxaa xidhitaankii tababarkaasi si durugsan ula dardaarmay hogaaminta dhexe wasiirka hanti’dhawraha guud ee DDSI mudane Aadan kuusow cali.
Wuxuuna si qoto dheer ugu nuux nuuxsaday hantidhawraha guud ujeedooyinka iyo jihooyinka siyaasadeed ee XDSHSI dadaalada aan wahsiga lahayn ee ay xukuumada iyo Xisbigu ugu jirto gaadhsiinta shacabka deegaanka horumar aan soo noqod lahayn.
Waxaa kale oo uu ka waramay guulaha laga XDSHSI ka soo hooyay dhinacyada adeegyada bulshada iyo kor u qaadida koboca dhaqaalaha la dagaalanka saboolnimada iyo jahliga.
Ugu danbayntii waxa uu hanti dhawraha guud si mug leh ugu booriyay hogaaminta dhexe ee degmooyinka gobolka liibaan in ay meelmariyaan jihooyinka hayaanka geedi socodka hirgalinta istaraatijiyadaha iyo qorshayaasha horumarineed ee uu dajistay XDSHS, xoojiyaana hawlaha waxqabadka iyo hirgalinta mashaariicaha horumarineed. Cashiradii ay ku qaateen tababarkani uga faa’iideeyaan bulshada gaadhsiinaana ilaa heer tuulo.